Somaliland oo xukun Xabsi ah ku riday Sarkaal Xiriir la sameeyay dowladda federaalka Soomaaliya. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Somaliland oo xukun Xabsi ah ku riday Sarkaal Xiriir la...
Somaliland oo xukun Xabsi ah ku riday Sarkaal Xiriir la sameeyay dowladda federaalka Soomaaliya.
Maxkamadda Ciidamdada Millateriga Somaliland ayaa xukun adag ku riday Korneyl Jaamac Doolaal oo ka tirsanaa Saraakiisha Millateriga Somaliland, kadib markii ay la xiriirisay dowladda federaalka Soomaaliya.
Korneyl Jaamac Doolaal ay maxkamaddu ku xukuntay labo sanno oo xabsi millateri ah.
Eedeymaha loo cuskadaya xukunka maxkamadda ayaa waxay ku qotomeen inuu xiriir dhanka telefoonka ah la sameeyay shaqsiyaad jooga magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, midaasi oo ay maxkamadu ku tilmaamatay dembi,
Maxkamadda ayaa u aragta in Korneylka uu dambi ka galay Somaliland, maadama uu xiriir la sameeyay shakhsi jooga Soomaaliya, waxayna wararka aan helayno sheegayaan inuu Dolaal kala hadlay shaqsigaas arrimo qoys oo keliya.
Arrintaan ayaa meesha ka saareysa eedeyn hore loogu soo jeediyay Korneylka oo sheegayay inuu ku kacay khiyaamo qaran iyo kacdoon ciidan, kadib markii ay maxkamaddu cadeyn kari weyday cod lagu sheegay sir oo ay kusoo eedeysay xeer ilaalinta ciidanka Somaliland.
Sidoo kale waxay kusoo aadeysa xili muddooyinkii dambe dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo si qarsoodi ah uga qoraneysay deegaano ka tirsan Somaliland
Ilo wareedyo ayaa sheegay in ciidamada ay dowladda ka qoraneyso Somaliland ayaa xogtooda aad loo qariyay, waxayna xiligan laga diiwaan-geliyay magaalooyinka Laascaanood iyo Ceerigaabo.
Tirada ciidankaas oo aan si rasmi ah loo heynin ayaa la sheegay in la qoray laba jeer, oo markiiba ah la qoray ciidan aan ka yareyn 400-500 oo askari, waxaana bilowgii ciidanka la qoray ayaa kamid noqday kumanaanka askari ee loo qaaday dalka Eritrea,
halka bilo ka horna la qoray kuwa kale oo aan la sheegiin halka la geeyay, waxaase la xaqiijiyay in loo qortay ciidannimo.
Lama oga in dowladda federaalka ciidamadaas u tababarayso qalalaase laga abuuro Somaliland iyo in loo qortay kamid noqoshada ciidanka dowladda Soomaaliya, hase yeeshee odayaasha degaanka ayaa sheegay inay walaac ka qabaan.
Previous articleSenate-ka Mareykanka oo Wacad ku maray in ay cunaqabatayn saari doonaan Gudoomiye Mursal dhaqaalahana ka jarayaan somaliya hadii mudo kordhinta uu Saxiixo farmaajo
Next articleMadaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed laftaagreen oo bisha ramadaan ka digay Qaraxyada iyo dilalka shabaab..
Madaxweynaha Dowladda Hir-shabeelle Mudane Cali Cabdulahi Xuseen Guudlaawe iyo Wakiilka Qarmada midoobey Soomaaliya Jams swan oo yeeshay Kulanka dhanka Zoomka ayaa kawada hadlay Howlaha...
Banaanbax lagu taageerayo go’aanka uu madaxweynaha uu ku ansixiyay in gobolka...
Ugu yaraan 163 Falastiiniyiin ah iyo lix sarkaal oo booliska Israa’iil...
Midoowga Musharxiinta oo digniin ka soo saaray kulanka Baarlamaanka ee maalinta...